Final-ka Coppa Italia oo waqtigiisa la bedeli karo, iibinta tigidhada oo berri bilaabmaysa iyadoo loo adeegsan doono tiknolojiyadda VAR – Gool FM
Final-ka Coppa Italia oo waqtigiisa la bedeli karo, iibinta tigidhada oo berri bilaabmaysa iyadoo loo adeegsan doono tiknolojiyadda VAR
Raage April 20, 2017
(Roma) 20 Abriil 2017 – Iibinta tigidhada lagu daawan doono final-ka Coppa Italia ayaa bilaabmi doona berrri oo Jimce ah, balse taariikhda maalinta la qabanayo ayaa isbedeli karta.
Kooxaha Juventus iyo SS Lazio ayaa isku arki doona gegada Stadio Olimpico, iyadoo berri si rasmi ah loo bilaabi doono iibinta tigidhada oo u dhaxayn doona €35 iyo €120, iyadoo muhiimadda 1-aad la siinayo dadka haysta tigidhada fasal-ciyaareedka oo idil (season tickets).
Ciyaarta ayaa markii hore la qorsheeyay Jimce 2-da Juun, balse usoo bixitaanka Juve ee nus-dhamaadka Champions League ayaa keeni kara in la bedelo jadwalka, gaar ahaan haddii ay Bianconeri usoo gudubto final-ka Cardiff.
Sanaddii 2015, isla labadan kooxood ayaa soo gaarey final-ka Coppa Italia markaasoo ciyaarta lagasoo wareejiyay 7-da Juun lana keenay 20-ka Maajo, kaddib markii ay Juventus soo gaartey Champions League final oo lagu qabtay Berlin.
Ciyaarta dhamaadka Coppa ayay sidoo kale u badan tahay in loo isticmaalo hannaanka Video Assistant Referees, iyadoo ay labada naadiba isku raaceen sida ku dhigan Il Tempo, balse waa in Lega Serie A ay ogolaansho ka heshaa FIFA iyo Jamciyadda International Football Association Board.
Lionel Messi oo lagu soo daray shaxda kooxda ugu xun wareega sideed dhammaadka Champions League...(Yaa kaloo ku jira?)
Milan oo markale maanka ku haysa Mateo Musacchio